Gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey oo xalay ku qarxay garaash ku yaala agagaarka Isgoyska Dabka
Xalay saacadu markii ay aheyd 11:30 daqiiqo saq dhexe ee habeenimo ayaa qarax aad u xoogan waxaa uu ka dhacay agagaarka isgoyska Dabka wadada Maka Al-Mukarama ee magaalada Muqdisho.
Qaraxan ayey wararku sheegayaan inuu ka dhacay garaash ku yaala nawaaxiga isgoyska Dabka ka dib markii qarxay gaariga mineysan oo ka mid ahaa gaadiid ku jiray garaashkaasi.
Gaariga qarxay ayaa halkaas ku basbeelay, iyadoo qaraxaas ay waxyeelo ka soo gaartay gaadiid kale oo ku jiray garaashka, lamana sheegin khasaare nafeed oo ka dhashay gaarigaas qarxay.
Wararka qaar ayaa sheegayan in gaarigan miineysan markii hore lagu wargeliyey ciidamada dowlada, hase ahaatee uu qarxay wax yar ka hor inta aysan halkaas gaarin ciidamada.
Goob joogayaal aya sheegay in ciidamada dowlada ay agagaarka garaashkaas ka qabqabteen dhowr qof oo lagu tuhunsan yahay iney qaraxaas wax ka ogaayeen.